बुढीगंगामा पानी घट्यो कि बेलीब्रिज जोडियो, ढुक्क हुनुस्: अध्यक्ष थापा - नागरिक रैबार
बाजुरा जिल्लामा असार यता अविरल बर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोले साँफे मार्तडी सडकखण्ड छेदविच्छेद् भएको लगभग तीन महिना जति पुग्न लागि सकेको छ ।
यस विषयमा जन चाँसो राख्ने जो कोहीले सामाजिक सञ्जाल वा नयाँ प्रविधि अनुसारको भर्चअल गफ र नेताहरुको फूर्सदको राजनीति सिबाहेक अरु केही हुन सकेको छैन् । तर, त्यस यता बाजुराली जनताले पाउनु जति दुःख त पाएकै छन्, भनि साध्य छैन् ।
उपल्लो राजनीतिक तहबाट जनतालाई सान्त्वनाका पोकापनि बेला बखत बाँढिएकै छन् । यो त बाजुराली जनताले पाउँने कुनै नौलो कुरा नि भएन् । जहिल्यै हो । उसो त जनप्रतिनिधी वा नेताहरुले जनताका लागि कुनै कामै गरेका छैनन् भन्न भने यो नागरिक रैबारबाट खोजिएको होईन् । अन्यथा नहोस् ।
नेताहरुबाट कैयाैँ काम भएको, भईरहेको हुँदाहुँदैपनि यतिबेला बल्लतल्ल २६ वर्षपछि तँग्रिएको साँफे मार्तडीसडक खण्ड कैयौँठाउँमा चुढिँएर ईक्णीखोलादेखि सदरमुकाम हुँदै विच्छ्यासम्मका जनतालाई हुन गएको क्षेतिको हरहिसाव गरि साध्य छैन् ।
तथापी पनि जनताका नेता जनताका लागि कहाँ कति खटिराख्नु भाछ भनेर सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापासँग नागरिक रैबारका कार्यकारी सम्पादक मदन विकको टेलिफोनमा भएको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित् अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
अध्यक्ष ज्यु नमस्कार ।
केमा व्यस्त हुनुहुन्छ नि यतिखेर ?
अब हामी जनताका सेबक केमा व्यस्त हुनु नि आफै बुझ्नुस् न ।
भनेपछि जनताका काममा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
बाजुराली जनता साँफे मार्तडी सडकसञ्जालबाट छुटिएको त लगभग दुईतीन महिना हुन लागि सक्यो ? यस विषयमा तपाईको तर्फबाट कहाँ के कति कसो पहल भै राछ ?
सडकका विषयमा गर्नुपर्ने पहल सबै भैराछ । कहीँ कसुर राखिएको छैन् ।
अनि पहल सबै भईसक्यो भन्नु हुन्छ । सडक साँफेदेखि यता बाजुराको प्रायः ठाउँमा विभत्स छ । जडाङ्गामा भएको बेलीव्रिजपनि बाढीले बगायो । आजभोलि मान्छेहरु तुईनको साहारामा वारपार भईराछन् । न तत्काल सडक सुचारु हुने केही सुरसार देखिँन्छ न बेलीव्रिजको कुरा ? पक्की पुलको त अहिले के कुरा गर्नु ? पहिला त्यो विषय त्यसै छ त ?
बेलीव्रिज तयार छ । बेलीव्रिज लाने कसरी त त्याहाँ ? तलबाट गाडीमा आउँने स्थिति छैन् । यो अहिले भौगोलिक कठीनाई छ, बर्षातका कारणले अलि असजिलो भाछ । त्यो सहज हुने वित्तिकै बेलीव्रिज जोडिन्छ ढुक्क हुनुस् । अरु क्रमश ।
हिजै एउटा राम्रो अभ्यास् भनौँ या नयाँ प्रविधिको सदुपयोग भनौ । नागरिक समाजका केही साथीहरुले बाजुरा जिल्ला स्थित राजनीतिक दलका नेता, स्थानीय जनप्रतिनिधी, संघीय साँसद् , प्रदेशका माननीय मन्त्री, पत्रकार तथा सरोकार राख्ने सबैसित यही सडकका विषयमा भर्चुअल मिटिङ्ग राख्यो । सबैले आ-आफ्ना धारणा व्यक्त गरे । अनि तपाईलाई त देखिन त ? कि केही फरक मत थियो कि थाहा भएन नि यस विषयमा ?
होईन । त्यो गफ कुराकानी गरि हुँदैन । काम हामीले गरिराखेका छाैँ । गफ कुराकानीमा त्यति मलाई विश्वास लाग्दैन् । जुन कुरा गरि सक्या छौँ । गरि सकेको कुरामा गफ गरिकन त फेरि काम हुने हैन नि त ।
सडक फरक ठाउँबाट ल्याउँन पहल चालिँदैछ भन्ने सुन्नमा आयो । के हो खास ?
तत्कालको विकल्प खोज्नका लागि त्योपनि प्राविधिक हिसावले उहाँहरुले नै भन्ने हो यो । यसमा कोही कसैले भनि हुँदैन् । प्राविधिकले अहिलेको बाटोमा लाने कि अन्त लैजाने कि त्यो कुरा त्यस क्षेत्रका प्राविधिकहरुले भन्ने हो । हामीले प्राविधिकलाई सबै विकल्पहरुको अध्ययन गरेर काम थालनि गर्न प्रेरित गरिराछाैँ । साविकको बाटोबाटै लाने कि अन्यत्रबाट लाने त्यो प्राविधिक दृष्टिकोणबाट नै भन्ने हो । यो उहाँहरु नै भन्नु हुन्छ । उहाँहरुले डिजाईन स्टमेट गर्छन् । जे निश्कर्ष निकाल्छन्, त्यही अनुसार हुन्छ । बाटो अन्यत्र लाने भन्ने हुँदैन् ।
भर्चअल मिटिङ्गमा त तपाई र बलदेव देखिन ? प्रायःको धारण सुन्दा माथिल्लो बाटोबाट ल्याउँने भन्ने भाछ यसमा के हो, के हुन सक्छ कुरा ?
होईन । यो मत विभाजन गरिकन मतका आधारमा बन्ने हाईन्, बाटो भन्ने कुरा । बाटो त हामीले पहिले जहाँ बनाएका छाैँ । बाटो त्यहाँ बनाउँने हो । प्राविधिक हिसावले अन्यत्र विकल्प खोज्नु पर्यो भने त्यो प्राविधिकले नै भन्ने हो । बरु तत्कालको विकल्पको कुरा होला । त्यसमा तीनवटा विकल्प छन् । एउटा आटिचौरबाट बनाउँदा खेरिपनि त त्यहाँ पाटाको पहिरो हामीले भन्नु भएन् । अरु केही गरी भएन भने पनि तत्कालका लागि कर्णाली करिडोर प्रयोग गरिकन भएपनि कोल्टीतिरबाट पनि मार्तडी जोड्न सकिन्छ ।
मुख्य रुपमा कुन ?
मुख्यरुपमा त हामीले जुन पहिलादेखिको बाटोको जुन ऐलाईमेन्ट छ । त्यहीलाई नै बनाउँने हो ।
सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य संस्था छन् तर उपकरण छैनन्
त्रिवेणीकी उपप्रमुख सुनारको नेतृत्वमा राहात वितरण